Jizọs Ò Bilitere n’Ọnwụ Otú E Dere Ya na Matiu, Mak, Luk na Jọn?
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | GỊNỊ MERE JIZỌS JI TAA AHỤHỤ MA NWỤỌ?
Ihe Ndị A Kọrọ Gbasara Jizọs Hà Mere Eme n’Eziokwu?
E gburu Jizọs onye Nazaret n’oge opupu ihe ubi n’afọ 33. E boro ya ebubo ụgha na ọ na-agba ọchịchị mgba okpuru. A kụrụ ya isi aba okpu, kpọgidekwa ya n’elu osisi. Ọ nụrụ ụfụ ọnwụ. Ma Chineke kpọlitere ya n’ọnwụ, mgbe ụbọchị iri anọ gachakwara, Jizọs laghachiri n’eluigwe.
Ị ga-agụta akụkọ a n’akwụkwọ Matiu, Mak, Luk, na Jọn. Ha dị n’Akwụkwọ Nsọ Grik nke Ndị Kraịst, nke ọtụtụ ndị na-akpọ Agba Ọhụrụ. Ma, ihe ndị ahụ a kọrọ hà mere eme n’eziokwu? Ajụjụ a dị oké mkpa. Ọ bụrụ na ha emeghị eme, o nweghị uru mmadụ ịghọ Onye Kraịst bara, olileanya anyị nwere na anyị ga-adị ndụ ebighị ebi na Paradaịs dịkwa ka mmadụ ịmụ anya na-arọ nrọ. (1 Ndị Kọrịnt 15:14) Ma ọ bụrụkwanụ na ha mere eme n’eziokwu, ọ pụtara na ọtụtụ ihe ọma ga-emere ụmụ mmadụ n’ọdịnihu, i nwekwara ike iso ná ndị ọ ga-emere. Ka anyị chọpụtazie ma ihe ndị a kọrọ n’akwụkwọ Matiu, Mak, Luk na Jọn hà mere eme ka hà bụ akụkọ ifo.
IHE IHE NDỊ MERE EME NA-EGOSI
Akwụkwọ Matiu, Mak, Luk na Jọn adịghị ka akụkọ ifo. Ị gụọ ha, ị ga-ahụ na ndị dere ha kpachapụrụ anya dee ihe ndị merenụ otú ha si mee. Dị ka ihe atụ, ha kpọrọ aha obodo ndị dị adị, ọtụtụ n’ime obodo ndị ahụ dịkwa ruo taa. Ha kọrọ gbasara ndị dịrị ndụ n’ụwa a, ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme achọpụtakwala na ndị ahụ ha kọrọ akụkọ ha dịrị ndụ n’ụwa n’oge ahụ.—Luk 3:1, 2, 23.
N’oge ndịozi Jizọs nakwa mgbe ihe dị ka otu narị afọ gachara, ụfọdụ ndị na-ede akụkọ ihe mere eme biri n’oge ahụ dere gbasara Jizọs. * Ihe Matiu, Mak, Luk na Jọn dekwara gbasara otú e si kpọgide ya n’osisi dabara n’otú ndị Rom oge ahụ si egbu onye a mara ikpe ọnwụ. Matiu, Mak, Luk na Jọn kọrọ ihe ndị ha kọrọ otú gosiri na ha mere eme n’eziokwu. Ha kọdịrị ihe ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs na-emetaghị. (Matiu 26:56; Luk 22:24-26; Jọn 18:10, 11) Ihe a niile gosiri na ha kwuru eziokwu nakwa na ihe niile ha dere gbasara Jizọs bụ eziokwu.
E nwere ọtụtụ ndị kweere na Jizọs dịrị ndụ ma mechaa nwụọ, ma ụfọdụ ekwetaghị na o bilitere n’ọnwụ. Ndịozi ya ekwetadịghị mgbe mbụ a gwara ha na o bilitela n’ọnwụ. (Luk 24:11) Ma ha na ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs mechara kweta mgbe ha hụrụ Jizọs ugboro ugboro mgbe o bilitechara n’ọnwụ. O nwedịrị mgbe Jizọs pụtara n’ihu ihe karịrị narị mmadụ ise.—1 Ndị Kọrịnt 15:6.
Ndị na-eso ụzọ Jizọs katara obi na-agwa mmadụ niile, ọbụnadị ndị ahụ gburu Jizọs, na a kpọlitela ya n’ọnwụ n’agbanyeghị na e nwere ike ịtụ ha mkpọrọ ma ọ bụdị gbuo ha. (Ọrụ Ndịozi 4:1-3, 10, 19, 20; 5:27-32) Hà gaara akata obi otú a ma ọ bụrụ na ha ejighị n’aka na a kpọlitela Jizọs n’ọnwụ? Ihe mere ọtụtụ ndị ji ghọọ Ndị Kraịst, ma n’oge ahụ ma taa, bụ n’ihi na obi siri ha ike na a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ.
Ị gụọ ihe ndị Matiu, Mak, Luk na Jọn dere gbasara ọnwụ na mbilite n’ọnwụ Jizọs, ị ga-ama na ha bụ eziokwu. Ọ bụrụkwa na i jiri nwayọọ gụọ ha, ọ ga-edo gị anya na ihe ndị a mere eme. Ha ga-edokwu gị anya ma ị ghọta ihe mere ha ji mee. Isiokwu na-eso nke a ga-akọwa ya.
^ para. 7 E nwere otu nwoke aha ya bụ Tasitọs. A mụrụ ya mgbe ndịozi Jizọs ka nọ ndụ. O kwuru, sị: “Ọ bụ mgbe Taịbiriọs na-achị ka otu n’ime ndị ọchịchị anyị aha ya bụ Pọntiọs Paịlet mara Kraịst ikpe ọnwụ, onye e si n’aha ya nweta aha bụ́ [Ndị Kraịst].” Ndị ọzọ kọrọ gbasara Jizọs bụ Switoniọs (ọ dịrị ndụ n’oge ndịozi Jizọs); Josifọs bụ́ onye Juu bụ́ ọkọ akụkọ ihe mere eme (ọ dịrị ndụ n’oge ndịozi Jizọs); nakwa Plini nke Nta, bụ́ gọvanọ Bitinia (obere oge ndịozi Jizọs nwụchara).
Gịnị Mere na E Nweghị Akwụkwọ Ọzọ E Dere n’Oge Ndịozi Kwuru Ihe Gosiri na Jizọs Si n’Ọnwụ Bilie?
Ọ bụ eziokwu na Jizọs bụ onye a ma ama, ma, anyị ekwesịghị ịtụ anya na anyị ga-ahụ akwụkwọ ndị e dere n’oge ndịozi Jizọs, ma e wezụga akwụkwọ ndị dị na Baịbụl, kwuru ihe mere anyị kwesịrị iji kwere na Jizọs dịrị ndụ, nwụọ, a kpọlitekwa ya n’ọnwụ. Otu ihe mere anyị ji kwuo otú ahụ bụ na ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ puku afọ abụọ kemgbe e dere akwụkwọ Matiu, Mak, Luk na Jọn. Ha so n’akwụkwọ ole na ole n’ime akwụkwọ ndị e dere n’oge ahụ ka dị taa. (1 Pita 1:24, 25) Ihe ọzọkwa bụ na ọtụtụ ndị iro Jizọs n’oge ahụ agaghị anọkata dee ihe ọ bụla ga-eme ka ndị mmadụ kweta na ihe ndị a na-akọ gbasara Jizọs bụ eziokwu.
Otu n’ime ndịozi Jizọs aha ya bụ Pita kwuru gbasara mbilite n’ọnwụ Jizọs, sị: “Chineke kpọlitere Onye a n’ụbọchị nke atọ ma mee ka ọ pụta ìhè, ọ bụghị nye mmadụ niile, kama nye ndị àmà Chineke họpụtara tupu oge eruo, nye anyị, bụ́ ndị anyị na ya riri ma ṅụọ mgbe o bilitesịrị ná ndị nwụrụ anwụ.” (Ọrụ Ndịozi 10:40, 41) Gịnị mere na ọ bụghị mmadụ niile ma na Jizọs ebilitela n’ọnwụ? Akwụkwọ Matiu gwara anyị otu n’ime ihe ndị kpatara ya. O kwuru na mgbe ndị Juu bụ́ ndị iro Jizọs nụrụ na a kpọlitela Jizọs n’ọnwụ, ha gbara mbọ ka ndị mmadụ kwụsị ịkọsa ya.—Matiu 28:11-15.
Ọ̀ pụtara na Jizọs achọghị ka ndị mmadụ mara na a kpọlitere ya n’ọnwụ? Mba. Pita sịrị: “O nyekwara anyị iwu ikwusara ndị mmadụ ozi ọma na ịgba àmà nke ọma na onye a bụ Onye ahụ Chineke kpebiri na ọ ga-abụ onyeikpe nke ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ.” Ezigbo Ndị Kraịst kwusara ya, ha ka na-ekwusakwa ya.—Ọrụ Ndịozi 10:42.